Manaova dokam-barotra eto amin'ny vavahady ofisialin'ny vaovao momba ny sekoly ankehitriny: vaovaon'ny sekoly ankehitriny
Ny News School amin'izao fotoana izao dia manome atiny isan-karazany mahasoa sy mahaliana isam-bolana amin'ireo Nizeriana an-tapitrisany. Ny isan-jaton'ny mpamaky anay dia Nizeriana izay mitady ny fidirana amin'ny andrim-panjakana Tertiary, mpikaroka vatsim-pianarana na nahazo diplaoma mitady asa.
Manolotra vokatra na serivisy hahaliana ny Nizeriana ve ianao? Avy eo ity bilaogy ity dia làlana tena tsara hanaparitahana vaovao momba ny orinasanao.
Ireto ny statistikan'ny fifamoivoizana Google Analytics (Oktobra 2019):
Pejy 250,000 mahery isan'andro hevitra (hiseho 250,000 XNUMX heny isan'andro ny doka nataonao)
Fitsidihana tsy manam-paharoa 7,000 000 7 isam-bolana (ho hitan'ny Nizeriana 000 000 XNUMX mahery isam-bolana ny doka nataonao)
Mpitsidika vaovao 75% isam-bolana (ny dokambarotra haseho amin'ny mpanjifa vaovao 2,000 000 mahery isam-bolana)
Fitsidihana mihoatra ny 75% avy amin'i Google (ny dokambarotra ho hitan'ny mpihaino vaovao isan'andro, fa tsy ny mpamaky miverimberina izay tsy hiraharaha izany amin'ny ankapobeny).
Mombamomba ny mpijery
Ny ankamaroan'ny mpamaky anay dia ireo Nizeriana nidina an'ity bilaogy ity taorian'ny nitadiavany ny Google momba ny fampahalalana marobe momba an'i Nizeria sy Nizeriana.
Satria ny ankamaroan'ny fitsidihana dia avy amin'ny motera fikarohana, 75% ny mpitsidika anay dia mpitsidika vaovao. Noho izany, raha misy andiana Nizeriana mahita ny dokam-barotrao amin'ity volana ity, andiana Nizeriana vaovao hafa no hahita azy amin'ny volana ho avy - izay midika fampahafantarana bebe kokoa ho anao.
Safidy Slot Slots
Lohateny 728 x 90 sy (350 x 100 ho an'ny finday) Banner
Sidebar ankavia 150 x 200 Banner
Sidebar ankavanana 300 x 120 Banner
Fandraisana an-tanana ny zava-misy (Fototra feno momba ny tranokala)
Doka rohy an-tsoratra eo ambanin'ny lahatsoratra rehetra
Doka kendrena: Doka amin'ny pejy lahatsoratra manokana na kendrena
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa aminay @ support [at] currentschoolnews.com.
Raha toa ny vokatrao / serivisinao dia mety amin'ny fampiroboroboana amin'ny tranokala currentschoolnews.com, halefanay aminao ny antsipirian'ny fandoavanay. Rehefa avy nampandrenesinay ny momba ny fandoavam-bolanao izahay, dia handahatra ny doka hataonao araka izay azo atao.